China Engagqwali Channel Channel Ibha Ukukhiqiza kanye Factory | I-Huaxiao
Isiteshi sensimbi engagqwali siyisigaba esimise okwe-groove sensimbi ende, okufana nogongolo i. Insimbi yesiteshi ejwayelekile isetshenziswa kakhulu ekwakheni izakhiwo, ekukhiqizeni izimoto.
Sino Engagqwali umthamo mayelana engagqwali Channel ibha
Usayizi : 5 # - 40 #, 40 x 20 - 200 x 100
Insimbi engagqwali ibha Inqubo Yokukhiqiza Ukuhlolwa nokuhlanzwa kwe-ingot
Imigqa yokuhlanza ifaka phakathi: ukuqhuma kwesibhamu, ukuhlolwa kobuso be-infrared, ukutholwa kwephutha le-ultrasonic nokugaya. Njengoba izinga lokusakaza okuqhubekayo likhuphuka, uma ukusakaza okuqhubekayo kungakhipha i-billet engenasici, ulayini wokuhlanza i-billet ungashiywa.
Insimbi engagqwali yase-Austenitic izinzile lapho ifudunyezwa futhi ayikwazi ukuqiniswa ngokucisha. Lolu hlobo lwensimbi lunamandla nobulukhuni obuhle, ubunzima bokushisa obuphansi obuhle kakhulu, abukho uzibuthe, ukucubungula okuhle, ukwakha nokwakha izakhiwo, kepha kulula ukukhiqiza ukuqina komsebenzi. Ngasikhathi sinye, lolu hlobo lwensimbi lunokushisa okuphansi kakhulu futhi luba ne-ductile kakhulu emazingeni okushisa aphansi, ngakho-ke izinga lokushisa lingashesha kunelensimbi engenasici ye-ferritic, liphansi kancane kunezinga lokushisa le-plain carbon steel.
Roll imbobo design
Lapho kukhiqizwa imigoqo yensimbi engagqwali, uhlobo lwembobo yokugoqa ngokuvamile lisebenzisa uhlelo lwembobo oluyisiyingi. Lapho kuklanywa uhlobo lomgodi, kubhekwa ukuthi uhlobo lomgodi lunokuzivumelanisa nezimo okuqinile, futhi uhlobo lokufaka imbobo kanye nokuqalisa kabusha kwesigayo kuncishisiwe, okungukuthi, uhlobo lomgodi lungashintshelwa kwimikhiqizo eyahlukahlukene, okuvumela uhlobo lomgodi ukuthi ube nokulungiswa okukhulu kwegebe, ukuze wonke umkhiqizo uhla ukunciphisa ushintsho lomumo womgodi wesigayo sangaphambi kokuqeda.
Ukulawulwa kokushisa kwe-Rolling
Lapho insimbi engagqwali isongwe, ukumelana kwayo ne-deformation kuyazwela kakhulu ekushintsheni kwezinga lokushisa. Ikakhulukazi ekugingqikeni okunzima, ngenxa yejubane lokugingqika okuphansi, ukukhuphuka kwezinga lokushisa okubangelwa umsebenzi wokusonteka akwanele ukunxephezela ukwehla kokushisa kwesitoko esigingqikayo uqobo, okuholele ekwehlukaneni okukhulu kokushisa kwekhanda nomsila. Ukubekezelelana komkhiqizo kunomphumela omubi nokukhubazeka ebusweni kanye nokukhubazeka kwangaphakathi nakho kungenzeka kusitoko esigoqiwe, kuthinte ukufana kokusebenza komkhiqizo kokugcina. Ukuze uxazulule lezi zinkinga ezingenhla, i-billet evuthayo ibhekene nokugingqika okunzima, bese ingena esithandweni (noma igesi) esibambe isithando somlilo noma isithando somlilo sokuvuselela esilahlwa phakathi kokugingqika okunzima nokugingqika okuphakathi, futhi izinga lokushisa lenziwe lafana ngaphambi kokungena kwiyunithi yokugoqa okuphakathi. Ukugingqa. Ukuze ulawule ukukhuphuka kwezinga lokushisa ngokweqile kwezingxenye ezigoqiwe ngesikhathi sokuqedela nokuqedela ngaphambi kokuqeda, idivaysi yokupholisa amanzi (ithangi lamanzi) ngokuvamile inikezwa phakathi kwamasethi amabili okugaya okugayo naphakathi kwezindawo zokugaya zokuqedela. Ngakho-ke, ukulawula okufanele usayizi wokusanhlamvu kungatholakala ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kobuchwepheshe komkhiqizo wokugcina.
Ukwelashwa kokushisa oku-inthanethi kwensimbi engagqwali
Esikhathini esedlule, ukwelashwa kokushisa kwamabha ensimbi engagqwali bekwenziwa ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ngokuthuthukiswa kwesayensi nokujula kocwaningo lwenqubo egingqikayo, ukwelashwa kwesimanje kwensimbi engagqwali nakho kwenziwa online. Lapho kukhiqizwa ibha, yensimbi engenasici e-austenitic ne-ferritic, akulula ukukhiqiza ukuqhekeka okubandayo nokuzikhomba, ukupholisa umoya noma ukupholisa isitaki ngemuva kokugingqika, noma idivaysi yokupholisa amanzi ngaphambi kokundiza kwe-shear ukufeza ukucima ukushisa okusalayo; ukukhiqizwa Esimweni sensimbi ye-martensitic engagqwali, kulula ukukhiqiza ukuqhekeka okubandayo, futhi akukwazi ukupholiswa ngqo embhedeni wokupholisa ngamanzi okupholisa. Isakhiwo sombhede wokupholisa sihlukile embhedeni obandayo wokukhiqiza insimbi yekhabhoni. Enye indlela ukusebenzisa i-rack enezinyathelo ezithuthukisiwe. Umbhede obandayo, njengombhede obandayo wesitshalo sase-US Teledyne AIIvac, esakhiwe nguDanieli e-Italy ngo-1989, uphumela kuthangi ohlangothini lokushisa okuphezulu. Ithangi lingagcwaliswa ngamanzi ukucwilisa umbhede obandayo emanzini, ukuze kwenziwe insimbi engagqwali e-austenitic. Ukucima amanzi, kepha hhayi ukucima amanzi, kungena ngqo embhedeni wokupholisa. Umbhede wokupholisa ungaphinde uhlonyiswe ngesigqoko esivimba ukushisa ukubambezela ukupholisa kwesitoko esigingqikayo. Lapho ikhava evikela isetshenziselwa ukupholisa okubambezelekile, izinga lokupholisa liyingxenye yezinga lokupholisa lemvelo. Izinga eliphansi lokupholisa libaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuqhekeka kwe-hysteresis brittle yensimbi engenasici ye-martensitic; enye indlela: yakha ingxenye eyodwa yombhede wokupholisa ube wuhlobo lwamaketanga, kanti enye ingxenye ingumbhede wokupholisa wohlobo lwe-rack ojwayelekile. Isondo elihambayo linikezwa ikhava yokulondoloza ukushisa. Lapho kukhiqizwa insimbi engagqwali ye-martensite, abagundi ezindizayo basika ucezu olugoqekile lwaba irula eliphindwe kabili noma ubude obulungisiwe. Uma kungumbusi omningi, umbhede obandayo wohlobo lwamaketanga udonswa ngokushesha kwikhava yokulondoloza ukushisa, bese usika ikhava esembozweni. Umbusi ube esethunyelwa emgodini wokufudumeza oshisayo, bese irula elingaguquki lidonswa ngqo emgodini wokuvikela ukushisa ukuze lipholise kancane.
Langaphambilini insimbi engagqwali engela Ibha
Olandelayo: insimbi engagqwali Amacala Bar
Usayizi Webha Yesiteshi
Ibha Yesiteshi Engagqwali